Nmeputa ohuru - Foton Motor Group Co., Ltd.
OTlọ ọrụ FOTON MOTO 4.0
Otu usoro R&D zuru ụwa ọnụ na Beijing dị ka isi ụlọ ọrụ, Germany dị ka etiti nke elektrọnik & ngwa eletriki na teknụzụ n'ọdịnihu na Japan dị ka onye R&D na-anya ụgbọ ala iji wuo ikike teknụzụ ọhụụ nke ụwa.
Nchọpụta na mmepe
teknụzụ na mmadụ
Ike ohuru na-apụta site na mgbanwe n'etiti teknụzụ na mmadụ. OTlọ ọrụ R&D nke FOTON dị na China, Germany na Japan achịkọtala ndị injinia 6,500 site na mba 40 wee hụ 5,000 R&D patents.
R & D IWU 300
Ule na nkwenye
ike ịme anwansị arụmọrụ
Ngwuputa oru nyocha nke mmeghari ihe nke ulo oru tinyere nchedo ugboelu, aerodynamics na nkwekorita NVH na njikarịcha nke na emeziwanye ugbo ala ugbo ala, nchekwa na ntukwasi obi.
EMEGBU AH SAR SA FLỌ Nchedo
Ule ike Cab na-eduga na ụlọ ọrụ ahụ.
Onye mbụ na-eduzi nyocha ikuku ikuku CFD na ọwara ụgbọ ala na China, na-ebelata nguzogide ifufe site na 20% na ịchekwa 4% mmanụ.
NVH sim simation na ọnwụnwa ule
Technologylọ ọrụ na-eduga NVH ịme anwansị technology idobere, rụọ ụgbọala na-akwọ ụgbọala ahụmahụ n'ụzọ dị irè site na mbenata vibration na mkpọtụ nke isi mmiri dị ka engine, ahụ na Chassis.
Nrụgide ọrụ zuru ụwa ọnụ na ịdị ire ụtọ
Industrylọ ọrụ na-eduga pụrụ ịdabere na anwụ ngwa ngwa
DRkwọ ụgbọala n'ụzọ amamihe dị na ya
mmadụ, ụgbọala na okporo ụzọ
FOTON kwalitere China mbụ kwurula gwongworo na 2016. Ozi a na-akọrọ n'etiti mmadụ, ụgbọala na okporo ụzọ maka nchebe, nke ọma, ike ịzọpụta na ịrụ ọrụ nke ọma ịkwọ ụgbọala site na IOV, nnukwu data na ngwa nke L3 kwurula kwụ ọtọ. A ga-amalite imepụta nnukwu igwe kwụụrụ onwe ya na 2025.
IFOTON, onye na - eweta ọrụ IOV na - eweta ọrụ, jikọọ mmadụ, ụgbọ ala na ọnụahịa dabere na IOV, nnukwu data na igwe ojii iji kesaa ozi oge, na-ekwukọrịta ngwa ngwa na ụwa ma bulie ụgbọ ala R & D, imepụta, ahịa na ọrụ iji nwee ike ndị ọrụ iji nweta ọrụ ọgụgụ isi na njikwa na ahụmịhe njikọta karịrị akwọ ụgbọala. IFOTON na-enye ezigbo ihe ngwọta IOV maka ụgbọ ala FOTON, ndị ahịa sitere na ụlọ ọrụ ahụ, ndị ọrụ yana ndị na-eweta ngwaahịa, ndị mmekọ na gọọmentị.
UBI Insurance Dedicated navigation Ibu ibu kenha Refueling awụfu nso nso Iwu na-akwadoghị ase Real-oge okporo ụzọ Near erimeri Nso na-adọba ụgbọala na Ọdụ kacha nso ọrụ ọdụ
LELỌ FLỌ LELỌ LELỌ
ime nchoputa nsogbu Nsogbu nnaputa Ntuziaka ugbo ala Ugbo ala mgbochi nsuso nsuso Ndozi ihe ncheta mberede nnaputa
Nwelite ngwaahịa Imeziwanye njikwa ahịa Nchịkwa Ahịa ahịa